Manao Fihetsiketsehana Ny Bilaogera Filipiana Hiarovana Ny Tranokalam-Baovao Rappler · Global Voices teny Malagasy
Ny hetsi-panoherana Zoma Mainty tao an-tanàndehiben'i Quezon, Filipina tamin'ny 19 Janoary 2018. Sary avy amin'i Therese Reyes, nozaraina tao amin'ny Twitter.
Mivory manao fihetsiketsehana hiarovana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety noho ny hetsika nataon'ny governemantan'i Rodrigo Duterte tamin'ny fanakatonana ny tranokalam-baovao Rappler ao Filipina ireo bilaogera Filipiana.
Ny 11 Janoary teo, nofoanan'ny Komitin'ny Fiarovana sy ny Fifanakalozana ny fahazoan-dàlan'ny fandraharahan'ny orinasa ary nilaza izy ireo fa nanitsakitsaka ny lalàna mikasika ny fitantanan'ny vahiny ny orinasan'ny fampitam-baovao ny orinasa.
Na dia nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny Tambajotra Omidyar avy any Etazonia aza ny Rappler, dia ny Filipiana monina any Filipina no tompony sy mitantana izany iray manontolo. Nanizingizina anefa ny filoha Duterte tao amin'ny Kabariny momba ny Firenena tamin'ny volana Jolay 2017 fa “an'ny Amerikana manontolo ny Rappler .”
Nanao ny hetsi-panoherana “Zoma Mainty” ireo mpanohana tamin'ny 19 Janoary, nanameloka ny fanafihana ny tranokalam-baovao natao fahirano ary nitaky fiarovana matanjaka kokoa ho an'ny fahalalahan'ny fampitam-baovao. Nivory tao an-tanàndehiben'i Quezon sy Bacolod mba hanandratra ny feon'izy ireo ny mpikambana ao amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra, ireo mpanao gazety avy amin'ny oniversite, ireo mpikatroka, ary ireo manandra-tenin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Ireo tanora Filipiana miaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Nipoaka ny hetsi-panoherana tao Timog sy Katipunan androany ho fanehoana ny hetsi-panoherana manohitra ny fanafihan'ny governemanta ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Ny fampitam-baovao Bacolod, nanatevin-daharana ny antso ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny vondrona.
Nanaisotra ny fahazoan-dàlan'ny Rappler ny SEC tamin'io herinandro io ihany, nampiantso ny tale jeneralin'ny orinasa Maria Ressa ihany koa ny Birao Nasionaly Mpanao Famotorana ao amin'ny firenena, niaraka tamin'ny mpitati-baovao sy ny iray tamin'ireo tompon'ny orinasa. Natao ny fanadihadiana noho ny fitakiana nataon'ny mpandraharaha Wilfredo Keng, izay nanambara fa nandika ny lalàna momba ny “fanalam-baraka antserasera” ny Rappler tao amin'ny lahatsoratra iray tamin'ny taona 2012 izay nanaporofo fa niray tsikombakomba tamin'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny fanondranana zava-mahadomelina i Keng. Nampanantena ny Rappler fa hamaha ny olana momba ny fanenjehana atao amin'ny orinasa .
Niara-nanoratra sy nanao sonia ny fanambarana iray maneho ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny fahalalaham-pitenenana, sy ny firaisankinany amin'ny Rappler ny 19 Janoary teo ireo bilaogera Filipiana. Ity fanambarana ity izay nosoratan'ny Bilaogera Reny Noemi Dado dia anisan'ny firotsahana amin'ny fanohanana avy amin'ny mpiseran'ny media sosialy Filipiana sy ny mpisera ao amin'ny Rappler ary mba ho fiarovana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa.
Bilaogera maro hafa no nasaina hanatevin-daharana ireo mpandray anjara amin'ny fanaovan-tsonia ao amin'ny http://bit.ly/bloggersforfreedom. Indro ireo andinin-teny tao amin'ilay fanambarana sy ireo mpanao sonia voalohany:
Fanambarana: Bilaogeran'ny Fahafahana
Manohana ny Rappler izahay noho izany, ny zony hitsangana, ny zon'ireo mpanao gazety miasa ao aminy sy ireo mpandray anjara, ary ny zon'ireo vondrom-piarahamonina mpamaky azy.
Mijoro manohitra ny fihetsika fampanginana sy fandrahonana ny mpanao gazety, ny bilaogera ary ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao izahay satria tsy tia fotsiny ny vaovaony sy ny fomba fijeriny ny Filoha sy ireo mpanohana azy.
Tonga ny fotoana ankehitriny hanaovana safidy eo anivon'ny adin'ny fahamarinana sy ny lainga, ny adihevitra sy ny tsy fitovian-kevitra, ny demaokrasia sy ny jadona.
Manasonia ny anaranay eto izahay mba hilazana amin'ireo olona rehetra fa efa nanao ny safidinay izahay. Bilaogera ho an'ny fahalalahana izahay.
Fanamarihana: Anisan'ny nanao sonia ny fanambarana ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices Filipiana Karlo Mongaya, Julius Rocas ary Mong Palatino (toniandahatsoratry ny Global Voices any Azia Atsimo Atsinanana.)